Aung Thamardi Co,.Ltd. - Myanmar Real Estate, Myanmar Real Estate Website, Myanmar Property Portal, Property for sale/rent| ShweProperty
Aung Thamardi Co,.Ltd.
01-521228, 09-32337888, 09-32337444, 09-250590756, Website
No.(3), Padauk Avenue 1 Street, Padauk Yeiktha, Mingalardon Garden City, Yangon Industrial Park, Mingalardon Township, Yangon, Myanmar.
About Aung Thamardi Co,.Ltd.
Aung Thamardi Co,.Ltd. ၏ နောက်ဆုံးရ အိမ်ခြံမြေများ
ငှားရန် - ရန်ကင်းရှိ သုံးထပ်တိုက်လုံးချင်းငှားမည်
ရန်ကင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Advertised by Aung…
Listed on 16 December 2016
ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	Ask For Price
Advertiser : Aung Thamardi Co,.Ltd.
01-521228, 09-32337888, 09-32337444, 09-250590756
ငှားရန် - ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန်တွင် ဂိုဒေါင် ငှားရန်ရှိသည်
ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဧရိယာ : 11232 sqft
ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန်တွင် ဂိုဒေါင် ငှားရန်ရှိသည်
ရွှေပေါက်ကံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	Ask For Price
ရွှေပေါက်ကံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရောင်းရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်းရောင်းမည်
ဧရိယာ : 990 sqft
ကမာရွတ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	2,700 သိန်း
Asking Price : 2,700 သိန်း
ရောင်းရန် - အင်းစိန်ရှိ နှစ်ထပ်လုံးချင်းရောင်းမည်
အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဧရိယာ : 1125 sqft
အင်းစိန် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	6,300 သိန်း
အင်းစိန် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Asking Price : 6,300 သိန်း
ငှားရန် - ဒဂုံ ယောမင်းကြီးလမ်းရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများငှားမည်
ဒဂုံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဧရိယာ : 1680 sqft
ဒဂုံ ယောမင်းကြီးလမ်းရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများငှားမည်
ဒဂုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	Ask For Price
ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင် ၅၂ လမ်းတွင်ရှိသော ပြင်ဆင်ထားပြီး ကွန်ဒို ရောင်းမည်
ဗိုလ်တထောင် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Listed on3January 2017
ဗိုလ်တထောင် ၅၂ လမ်းတွင်ရှိသော ပြင်ဆင်ထားပြီး ကွန်ဒို ရောင်းမည်
ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	2,100 သိန်း
Asking Price : 2,100 သိန်း
ရောင်းရန် - မအူပင်လမ်းတွင်ရှိသော အဆင့်မြင့် မီနီကွန်ဒို ရောင်းမည်
ဧရိယာ : 1150 sqft
မအူပင်လမ်းတွင်ရှိသော အဆင့်မြင့် မီနီကွန်ဒို ရောင်းမည်
စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,490 သိန်း
စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Asking Price : 1,490 သိန်း
ရောင်းရန် - မေတ္တာညွန့်တွင်ရှိသော ပထမထပ်တိုက်ခန်း ရောင်းမည်
တာမွေ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မေတ္တာညွန့်တွင်ရှိသော ပထမထပ်တိုက်ခန်း ရောင်းမည်
တာမွေ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	850 သိန်း
တာမွေ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Asking Price : 850 သိန်း
ရောင်းရန် - ဈေုးကြီးလမ်းတွင်ရှိသော ပါကေးခင်းထားပြီး တိုက်ခန်း ရောင်းမည်
ကြည့်မြင်တိုင် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဧရိယာ : 780 sqft
ဈေုးကြီးလမ်းတွင်ရှိသော ပါကေးခင်းထားပြီး တိုက်ခန်း ရောင်းမည်
ကြည့်မြင်တိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	580 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Asking Price : 580 သိန်း
ရောင်းရန် - ကွမ်းရွဲတန်းလမ်းတွင်ရှိသော တိုက်ခန်း ရောင်းမည်
ကွမ်းရွဲတန်းလမ်းတွင်ရှိသော တိုက်ခန်း ရောင်းမည်
ကြည့်မြင်တိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	430 သိန်း
Asking Price : 430 သိန်း
ရောင်းရန် - ဦးချစ်မောင်လမ်းတွင်ရှိသော ၃ လွှာတိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်
ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဧရိယာ : 687 sqft
ဦးချစ်မောင်လမ်းတွင်ရှိသော ၃ လွှာတိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်
ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	400 သိန်း
Asking Price : 400 သိန်း
ရောင်းရန် - အင်းစိန်လမ်းသွယ်(သံလမ်းအနီး)တွင်ရှိသော တိုက်ခန်း ရောင်းမည်
လှိုင် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အင်းစိန်လမ်းသွယ်(သံလမ်းအနီး)တွင်ရှိသော တိုက်ခန်း ရောင်းမည်
လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	370 သိန်း
လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Asking Price : 370 သိန်း
ရောင်းရန် - ဘူတာရုံလမ်းတွင် တိုက်ခန်း ရောင်းမည်
Listed on2January 2017
ဧရိယာ : 560 sqft
ဘူတာရုံလမ်းတွင် တိုက်ခန်း ရောင်းမည်
လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	285 သိန်း
Asking Price : 285 သိန်း
ငှားရန် - ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းတွင် ရုံးခန်းဖွင့်ရန်နေရာကောင်း တိုက်ခန်း ငှားမည်
ဧရိယာ : 1500 sqft
ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းတွင် ရုံးခန်းဖွင့်ရန်နေရာကောင်း တိုက်ခန်း ငှားမည်
ဒဂုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	11 သိန်း
Asking Price : 11 သိန်း
ငှားရန် - ရေကျော်လမ်းတွင် ဓါတ်လှေကားပါတိုက်ခန်း ငှားရန်ရှိသည်
ရေကျော်လမ်းတွင် ဓါတ်လှေကားပါတိုက်ခန်း ငှားရန်ရှိသည်
ပုဇွန်တောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	8 သိန်း
ပုဇွန်တောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Asking Price : 8 သိန်း
ငှားရန် - နဝဒေးလမ်းတွင် ပြင်ဆင်ထားပြီး တိုက်ခန်း ငှားမည်
ဧရိယာ : 1210 sqft
နဝဒေးလမ်းတွင် ပြင်ဆင်ထားပြီး တိုက်ခန်း ငှားမည်
ဒဂုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	8 သိန်း
ငှားရန် - မိုးကောင်းလမ်းတွင် အဆင့်မြင့် တိုက်ခန်း ငှားမည်
မိုးကောင်းလမ်းတွင် အဆင့်မြင့် တိုက်ခန်း ငှားမည်
ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	8 သိန်း
ငှားရန် - Junction ဇဝနအနီးတွင်ရှိသော ပရိဘောဂစုံပါသော တိုက်ခန်း ငှားရန်ရှိသည်
Junction ဇဝနအနီးတွင်ရှိသော ပရိဘောဂစုံပါသော တိုက်ခန်း ငှားရန်ရှိသည်
သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	7 သိန်း
ငှားရန် - လမ်းမတော် ၁၅ လမ်းတွင် တိုက်ခန်း ငှားရန်ရှိသည်
လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းမတော် ၁၅ လမ်းတွင် တိုက်ခန်း ငှားရန်ရှိသည်
လမ်းမတော် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	6.50 သိန်း
လမ်းမတော် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Asking Price : 6.50 သိန်း
ငှားရန် - အင်းစိန်လမ်းမတွင် ပါကေးခင်းထားသော တိုက်ခန်း ငှားမည်
အင်းစိန်လမ်းမတွင် ပါကေးခင်းထားသော တိုက်ခန်း ငှားမည်
အင်းစိန် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	6 သိန်း
Asking Price :6သိန်း
123 > Last အီးမေးပို့ပြီး ဆက်သွယ်ရန် အမည် အီးမေး တယ်လီဖုန်း အကြောင်းအရာ သိလိုချင်တဲ့အချက် Enter the Captcha Submit
Please send me latest news, update special offers. About ShweProperty.com